Maoritania: Manao Diabe 700km Mitaky Ny Rariny Ireo Mpiasa · Global Voices teny Malagasy
Maoritania: Manao Diabe 700km Mitaky Ny Rariny Ireo Mpiasa	Voadika ny 26 Janoary 2013 14:06 GMT
Zarao: Tamin'ny Asabotsy 5 Janoary [ar], nanomboka nanao diabe lavitr'ezaka niainga tao an-tanànan'i Zouerat hihazo ny renivohitra Maoritania, Nouakchott ireo vondrona mpiasa tsy ara-dalàna na “Journalia” (mpiasa vonjimaika na isan-tonontaona). Raha ny fitambarany, diabe mirefy 700km no hovitain'ireo mpiasa mba hanoherana ny tsy rariny mihatra amin'izy ireo sy ny famitahana ataon'ny filoha Mohamed Ould Abdel Aziz, izay nampanantena fa handravina ny olana sy hampitsahatra ny fijalian'izy ireo. Te-hampita hafatra miompana amin'ny fanenjehana ny journalia ao amin'ny fireneny sy ny tsy fahazoany fisondrotan-karama sahaza azy ireto mpiasa ireto, ao koa ny fanararaotana azy ireo ataon'ny vondron'olom-baventy mpandraharaha tsy mampihatra ny lalàna.
Araka ny filazan'ilay mpikatroka Mohamed Salem Oul Kilani, ny hamita izany halaviran-dalana izany ao anatin'ny 22 andro no tanjona ary hihazo ny lapam-panjakana avy eo. Tamin'ny fanombohan'ny diabe, maro ireo mpanohana no niarahaba ireo mpanao fihetsiketsehana, naneho ny firaisankinany, ary nampitandrina ny manampahefana izay tsy mba mihaino ny fitarainan'izy ireo. Tamin'ny taon-dasa, nisy ihany koa ireo fihetsiketsehana maro hafa nataon'ireo mpiasa amin'ireo tanàna fitrandrahana izay mitaky ny fanatsarana ny fepetra momba ny asa ratsy dia ratsy iainan'izy ireo.
Sary avy amin'i @mezid_cheikh tao amin'ny Twitter, mampiseho ireo mpanao fihetsiketsehana sasany tamin'ny diabe.
Tsy vao voalohany no nisy izao hetsika izao. Efa nisy diabe anankiroa tahaka izao tamin'ny taon-dasa, ny voalohan'ny tamin'ny volana Martsa 2012, vondrona mpikatroka Maoritaniana no nanao diabe maherin'ny 470km ho fitakiana ny rariny ho an'ny tanànan'izy ireo, Nouadhibou, ary tonga teny amin'ny lapam-panjakana izy ireo tamin'izany. Ny faharoa kosa dia ireo mponin'i Mouzarzra izay nanao diabe 50km ho fitakiana fametrahana Gonjo (asphalta) eo amin'ny làlana manelanelana ny tanàna sy ny tanàn-dehibe ao Tike
:Ahmed Salem nibilaogy momba ny diabe من هم هؤلاء ؟ إنهم الجرنالية كما يعرفون بالصطلح المحلي لدينا هنا في موريتانيا. ظل الجرنالية لعقود يعملون في مناجم الحديد عندما كنا نشاهدم ونحن صغار كنا نقول إنهم أبطال لأنهم يحملون الحديد لكننا وبعد أن كبرنا ومرت علي آذاننا قصصا عن المستعمر, أي مستعمر يضطهد سكان مستعمرته تذكرنا هؤلاء وتذكرنا حملهم للحديد والحجارة فهمناهم وفهمنا عملهم إنهم في مستعمرة نعم مستعمرة داخل دولة إستعمار العصر( تاشرون)مقاولة الباطن ذلك الوسيط الذي يتبع له هؤلاء في غالب الأحيان يكون شخصاواحدا أومؤسسات صغيرة موجودة داخل حقيبة وصفهم مناديب العمال ذات يوم ب(التيفاي) البائع المتجول , كيف لنا أن نتخيل العامل لدي هذه المستعمرة الصغيرة كيف لنا أن نتخيل حاله ؟؟؟؟ إنه يعيش في جحيم إنه معرض للخطر أكثر من غيره في هذه المستعمرة وحتي في هذا البلد وينتج للبلد من أحد أكبر وارداتها الإقتصادية الشركة الوطنية للصناعة والمناجم كل هذا وبراتب شهري زهيد 70 ألف أوقية أي أقل من 200أورو.
Iza izy ireo? Journalia izy ireo, araka ny fiantsona azy ao Maoritania. am-polony taona no niasa tamin'ny fitrandrahana vy ny journalia ary efa zatra mitazana azy ireo izahay, fony izahay mbola kely, dia zatra miantso azy ireo hoe: be herim-po satria mibata vy, saingy ankehitriny amin'izao izahay efa somary lehibe izao, nahare tantara momba ny mpanjanaka izahay, izay nanenjika ny mponina nozanahiny, mahatsiaro azy ireo izahay ary mahatsiaro azy ireo mibata vy ary mazava aminay ny asan'izy ireo. Zanatany izy ireo, eny zanatany anaty firenena voazanaka (Tachron), ataon'ny mpiantoka mpanampy (sous-traitant), olona iray matetika na orinasa madinika ity mpanelanelana ity izay akaiky kokoa ny vahoaka . Ahoana no fomba fiheverantsika ny mpiasa ao amin'ity zanatany madinika ity? Ahoana ny fiheverantsika ny zava-iainany? Monina anaty helo ve izy ireo; anaty loza kokoa ireo mpiasa noho ireo olona monina ao amin'ity zanatany ity na indrindra ao amin'ity firenena ity; kanefa mbola mamokatra betsaka indrindra eo amin'ny sehatry ny fanondranana ara-toekarena ao amin'ny orinasam-pitrandrahana sy indostria ao an-toerana ho solon'ny karama isam-bolana latsaky ny 200 Euro.
Abdellahi Med Abdelrrahmane nanohana ireo mpiasa ihany koa, nitsikera ny fomba fandraisan'ny fitondrana sy ny media ny fitakian'izy ireo:
Nanomboka ny diabe ary mitondra hafatra feno hevi-teny momba ny firenena izay tsy mahafantatra fa ny antsasaky ny mponina ao aminy dia mpiasa sy mpanao gazety ary mpisolo vava izay tsy dia matotra loatra ahalala izao toe-javatra izao. Nasaina avokoa izahay rehetra mba hanohana azy ireo hitaky ny zony ary hiara-hiasa akaiky amin'izy ireo izahay mandrapaha-tratran'izy ireo ny tanjony sy ny fahamendrehan'izy ireo amin'ny maha-mpiasa azy izay miasa alina, may sy mijaly noho ny fibatana vy izay havadika trano, fiara, lapa manerana izao tontolo izao avy eo. Efa nizaka ny mafy rehetra ireo izay teo amin'ny toeran'izy ireo. Hotahian'Andriamanitra anie ireo mpiasa izay tsy mahazo rarinyavy amin'ny firenena sy ny fampahalalam-baovao.
Mejdi Ahmed nisioka mikasika ny fepetra momba ny asa iainan'ireo mpiasa Journalia:
Tsy misy fifanarahana arak'asa sy antoka, na fiahiana ara-tsosialy na fahasalamana ny Journalia miasa ao Maoritania, karazana fanandevozana izany.
Raby Idoumou nizara ny firaisankinany tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana ary nanoratra hoe: @rabyidoumou5 نتضامن مع مسيرة زويرات الراجلة باتجاه نواكشوط.. في بلد على راس البلدان المصدرة للحديد في العالم، “الجرنالية” يفتقدون لابسط حقوقهم المشروعة!
Miray fo amin'ny diabe Zouerat manerana an'i Nouakchott izahay. Ao amin'ny firenena anisan'ny mpanondrana vy voalohany manerantany, tsy mizaka ny zo fototra araka ny lalàna ny Journalia.
Dedda Cheikh Brahim nanaraka ny diabe tamin'ny nanombohany:
Vaovao lehibe: Tonga ao an-tanànan'i Afdirk ao #Maoritania ny diaben'ny Journalia. Miaraka aminareo izahay amin'izao dia fitakiana zo izao. 780 km miala ao Zouerat hatrany amin'ny lapam-panjakana.
Sid Ahmed Baba nanoratra tao amin'ny pejy Facebook-ny ihany koa:
Miainga ao an-tanànan'i Zouerate, mandeha tongotra. Ataon'ny filoha izay mandainga sy mampanantena tsy misy sorona ity firenena ity, mizaka ny tsy rariny sy lainga afafin'ny filoha isan'andro ireo mpiasa sy tsy an'asa
Vakio amin'ny teny Français, English, Magyar, Ελληνικά, Español, 日本語, عربي
Fahalalahàna mitenyFanoheranaHafanàm-po nomerikaMedia sy Fanoratan-gazetyMediam-bahoakaSendikàVonjy VoinaZon'olombelona